စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက် အရေးပါသောယှဉ်ပြိုင်မှုပေါ်လစီ | Commerce Journal
Home » -ပညာပေးအစီအစဉ်များ » စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက် အရေးပါသောယှဉ်ပြိုင်မှုပေါ်လစီ » အထွေထွေ
Tue, 09/23/2014 - 13:52 -- ydnar
အရေးကြီးပါသည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုပေါ်လစီနှင့် ပတ်သက် သည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆုံးဖြတ်ရန် လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းထားသောယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် (Competition Commission )နှင့် တရားရုံးတို့၏ အခန်းကဏ္ဍမှာလည်း အရေးပါလာတော့မည် ဖြစ်သည်။ ဤ ဆောင်းပါးတွင် ယှဉ်ပြိုင် မှု ပေါ်လစီက ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား (Productivity) နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (Investment) တို့ကို မြှင့်တင်ခြင်း အားဖြင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုI(Economic growth) ကို မည်သို့မည်ပုံအထောက် အကူပြုေ ကြာင်း ဆွေးနွေး ထားပါသည်။
စီးပွားရေး တိုးတက်မှု(Economic growth)ဆိုသည်မှာနိုင်ငံတစ် နိုင်ငံအတွင်း ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင် မှုများကို ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင် ခြင်းနှင့်အတူ ပြည်သူလူထု၏ အလုပ် အကိုင်နှင့် ဝင်ငွေများလည်း တိုးတက် ရရှိသည့် အခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို စုစုပေါင်း ပြည် တွင်းထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် တိုင်းပြည် ဝင်ငွေ (Gross Domestic Product-GDP) ဖြင့် ယေဘုယျ တိုင်းတာလေ့ရှိ သည်။
အိမ်ထောင်စုတစ်ခုချင်း၏ စီးပွား ရေးတိုးတက်မှုကို အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်သော တစ်ဦးကျ စီးပွားရေးတိုး တက်မှု (Positive economic growth per capita) ဖြင့် တိုင်းတာနိုင် သည်။ အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင် သော တစ်ဦးကျစီးပွားရေးတိုးတက်မှုဆိုသည်မှာငွေကြေးဖောင်းပွမှုကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ပြီးသောသို့မဟုတ် ငွေကြေးဖော င်းပွမှုကိုကာမိသောစီးပွားရေးတိုးတက်မှု (Inflation-adjusted economic growth per capita)ကို ဆိုလိုသည်။ အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်သော တစ်ဦးကျ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုက ပြည်သူများ၏ ဝင်ငွေမြင့်မားခြင်းနှင့် ဝယ်နိုင်စွမ်း အား တိုးတက်ခြင်းတို့ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ထိုကဲ့သို့ စီးပွားရေး တိုးတက်လျက်ရှိ သော နိုင်ငံများတွင် အိမ်ထောင်စု အများအပြားသည် ပိုမိုအဆင့်မြင့် ကောင်းမွန်သော ကုန်စည်နှင့်ဝန် ဆောင်မှုများကိုဝယ်ယူစားသုံးနိုင် ကြ ပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းလည်း မြင့် မားလျက်ရှိပါသည်။
စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို ဖြစ်စေ သော အကြောင်းအချက်များစွာရှိသည်။ အဆိုပါအကြောင်းအချက် များ ပေါင်းစပ်ခြင်းကြောင့်စီးပွားရေးတိုးတက် မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သကဲ့သို့အကြောင်း အချက်တစ်ခုတည်းကြောင့် လည်း စီးပွား ရေးတိုးတက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား တိုးတက်ခြင်း နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြင့်မားခြင်းကဲ့ သို့ သော သော့ချက်ကျသည့် အချက်များ က စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင် သည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအားနှ င့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှု (Competition) ရှိရမည်ဖြစ် ပါသည်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိလေ စီးပွားရေး တိုး တက်လေဖြစ်သော်လည်း တရားမျှတ သော စီးပွားရေးပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှု ဥပဒေပေါ်လစီ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားတိုးတက်ခြင်း ဆိုသည်မှာတူညီသောသွင်းအားစုများကိုအသုံးပြုပြီးကုန်စည်နှင့် ဝန် ဆောင်မှု ပမာဏ ပိုမိုထုတ်လုပ် နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ဥပမာအားဖြင့် ယခင်ကလုပ်သား ၁၀ ယောက်ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်း အရေအတွက် အခု ၂၀၀ ထုတ်လုပ်နေ ရာမှ ယခုအခါ ယင်းလုပ်သား ၁၀ ယောက်ဖြင့်ပင် ပစ္စည်းအရေ အတွက် အခု၂၅၀ ထုတ်လုပ်လာနိုင်ခြင်းမျိုးဖြစ် သည်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များပြားလာခြင်းက အရင်းအနှီး စုဆောင်းခြင်း (Accumulation of capital) ကို ဖြစ် စေပါသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးတက်ခြင်းက လုပ် သားများ ကို ပိုမိုထိရောက် အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုလာနိုင်သည်။ အရင်းအနှီး စုဆောင်းခြင်းက အခြေခံ အဆောက် အအုံကိုလည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ပိုမိုသစ်လွင်ကောင်းမွန်သောလမ်းတံတားများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန် သော ဆက် သွယ်ရေး ကွန်ရက်များ(Tele-communication networks)ကို ဖြစ် စေပါ သည်။ထို့ပြင်ကုမ္ပဏီအဆင့် အရင်းအနှီးစုဆောင်းခြင်းက အဆိုပါကုမ္ပဏီ ပိုင်လုပ်ငန်းနှင့် စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေပါ သည်။
ပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စွမ်းရည် ၃ မျိုး
ပြိုင်ဆိုင်မှု (Competition) က သွင်းအားစုများကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုနိုင်စေသည်။ ထို့ပြင် ပြိုင်ဆိုင် မှုသည် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက် ကြိုတင်ရှိထားရမည့် လိုအပ်ချက် တစ် ရပ် ( A pre-requisite ) ဖြစ်ပါသည်။ သာမန်အားဖြင့် ပြိုင်ဆိုင်မှု၏ ကောင်း ကျိုး သက်ရောက်ပုံများကို စွမ်းရည် ၃ မျိုးအဖြစ် အုပ်စု ခွဲခြားနိုင်သည်။ ၎င်းင်း တို့မှာ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် (Productive efficiency)? ၊ တီထွင်ဖန်တီးမှု စွမ်း ရည်(Dynamic efficiency) နှင့် ခွဲေ၀ မှုစွမ်းရည် (Allocative efficiency) တို့ ဖြစ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် - စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းက ယင်းတို့၏ သွင်းအားစုများကို အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်း (The most efficient way)ဖြင့်သုံးစွဲစေပါသည်။ ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကုန်ကျစရိတ် အသက်သာဆုံးဖြင့် ထုတ်လုပ်ရောင်းချ ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများ ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းက သွင်းအားစုများကိုထိထိရောက်ရောက် သုံး စွဲခြင်းအားဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား ကို တိုးတက်စေသည်။ ဤသည်ကို သွင်း အားစု စွမ်းရည်လမ်းကြောင်း (Resource efficiency channel) ဟူ၍ ခေါ်ဆိုသည်။ အကျိုးဆက် အနေဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မရှိသော လုပ်ငန်းများ စီးပွားရေးလောကမှ ထွက်ခွာသွားစေ သည်။ ထို့ပြင် စွမ်းဆောင် ရည်ရှိသော ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ ဈေးကွက်အတွင်း ဝင်ရောက်လာပြီး ဈေးကွက်ဝေစုများရရှိ စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်းများ ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းက စွမ်းဆောင်ရည်မရှိ သော လုပ်ငန်းများ၏ နေရာတွင် စွမ်း ဆောင်ရည်ရှိသော လုပ်ငန်း များဖြင့်အစားထိုးပေးသည်။ ဤသည်ကို အဝင်/အထွက်လမ်းကြောင်း (Entry/exit channel)ဟူ၍ခေါ်ဆို သည်။
တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည် - လုပ် ငန်းများပြိုင်ဆိုင်ခြင်းက ကုမ္ပဏီများအား ဈေးကွက် ပိုမိုရရှိရေးအတွက် ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုသစ်များ တီထွင်ဖန်တီးခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ထို့ ကြောင့် ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းက တီထွင်ခြင်း မှတစ်ဆင့် နည်းပညာ တိုးတက်မှုကို ဖြစ်စေပါသည်။ တီထွင်မှုမှ တစ်ဆင့် နည်းပညာ တိုးတက်စေသောကြောင့် တီထွင်မှုလမ်းကြောင်း (Innovation channel)ဟုခေါ်သည်။
ခွဲဝေမှုစွမ်းရည် - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်ခြင်းကစားသုံးသူများလိုချင်(သို့မဟုတ်)တောင်း ဆိုသော ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ကိုသာလျှင် ထုတ်လုပ်စေသည်။ စွမ်း ဆောင်ရည်ပြည့်ဝသောခွဲဝေခြင်း (Efficient allocation)ဆိုသည်မှာစားသုံးသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့တန်ဖိုးထားသော ကုန်စည်သို့မဟုတ် ဝန် ဆောင် မှုဖြစ်ပြီး စရိတ်အနည်းဆုံးဖြင့် ထုတ်လုပ်သောအရာကို ဝယ်ယူစားသုံး ရခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။
တကယ်လက်တွေ့တွင် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်နှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည် တို့ကခွဲဝေမှုစွမ်းရည်ထက် ပို၍အရေး ကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်ပြိုင်ဆိုင်မှု၊ ထုတ် လုပ်မှုစွမ်းအား၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စီးပွား ရေးတိုးတက်မှုတို့ကြား ဆက်နွယ်မှုကို လေ့လာရာတွင် Resource efficiency channel, Entry/exit channel နှင့် Innovation channe နှင့်တို့ကို အလေးထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤလမ်းကြောင်းများ၏ သဘောတရား ကို ဆက်လက်ရှင်းပြရန် ရှိပါသည်။
ပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတို့၏ ဆက်စပ်မှုကို လက်တွေ့ လေ့ လာထားသောပညာရှင်များ ၏ ကောက် ချက် ၄ မျိုးဖြင့်
(က) လွတ်လပ်သောဈေးကွက်များနှင့် ပြည်ပ ပြိုင်ဆိုင်မှုကထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအားကို တိုးတက်စေသည်။ (Open markets and competition from abroad increase productivity.)
(ခ) ပြိုင်ဆိုင်မှုက ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား ကို ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းထိ တိုးတက်စေသည်။ (Competition contributes with up to 70 percent to productivity growth.)
(ဂ) ပြိုင်ဆိုင်မှုက ဈေးကွက်အရွယ်အစားကိုကြီးမားစေသည်။ထို့ပြင်စွမ်းဆောင်ရည်မရှိသောကုမ္ပဏီ များ၏ နေရာ တွင် စွမ်းဆောင်ရည် ပည့်ဝသော ကုမ္ပဏီများဖြင့် အစားထိုးပေးသည်။ (Competition increases with market size and allows more efficient companies to replace less efficient companies.)
(ဃ)ဈေးကွက်အတွင်းဝင်ရောက်ရန် လွယ်ကူမှုကစီးပွားရေးနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုတိုးတက်စေသည်။ (Market entry increases economic growth and productivity.)
ပေါ်လစီ ချမှတ်သူများအတွက် ထိရောက်သည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုပေါ်လစီ(Effective competition policy) ကို ချမှတ်ရန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုး(A wide range of competition instruments) ကို ဆက်လက် ဖော်ပြသွားပါ မည်။